“Messi uma baahna fariinteyda” – Ivan Rakitić – Gool FM
“Messi uma baahna fariinteyda” – Ivan Rakitić
(Spain) 04 Seb 2020. Ciyaaryahanka qadka dhexe reer Croatia ee Ivan Rakitić, oo dhawaan ku biiray kooxda Sevilla ayaa ka hadlay muranka ka taagan mustaqbalka saaxiibkiis hore naadiga Barcelona ee Lionel Messi.
Ivan Rakitić ayaa wareysi uu ku bixiyay Radio “Cadena SER” ee dalka Spain wuxuu ku sheegay:
“Waxaan u maleynayaa in Messi uu heysto farriimo ku filan, marka u baahna fariin aniga iga timid”.
“Aad ayaan ii farxad galisay fariimaha aan dhawaan ka helay asxaabteyda Barcelona”.
“Qof walba wuxuu qiyaasayaa Messi oo la jooga Barcelona, faahfaahin intaas ka dheer kama sii bixin karo, sababtoo ah ma aqaano xaalada haatan taagan, laakiin wax badan ayaan ku raaxeystay ka garab ciyaarista Messi Xavi iyo Iniesta”.
Si kastaba ha noqotee, Ivan Rakitic oo 32 jir ah ayaa 6 xilli ciyaareed ku qaatay Barca ka hor inta uusan ku laaban Seville xagaagan.
N'Golo Kanté oo go’aamiyay wararka la xiriira inuu ka tagayo kooxda Chelsea
RASMI: Kooxda Manchester United oo lambarrada ka bedeshay labo ka mid ah xiddigaheeda... (Lambarkee loo dhiibay Mason Greenwood?)